ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ နှင့် မရောထွေးပါနှင့်။
ကိုဩဒိနိတ်: 19°00′N 70°40′W﻿ / ﻿19.000°N 70.667°W﻿ / 19.000; -70.667
República Dominicana (စပိန်)
ဆောင်ပုဒ်: "Dios, Patria, Libertad" (စပိန်)
နိုင်ငံတော် သီချင်း: ¡Quisqueyanos Valientes!
—၅၈.၀% မက်စတီဇို/အင်ဒီယို[မှတ်စု ၁]
• ပြင်သစ် ဆန်တိုဒိုမင်ဂို
• ဆန်တိုဒိုမင်ဂိုအား စပိန်တို့ပြန်လည်အောင်နိုင်ခြင်း
• စပိန်တို့ သိမ်းပိုက်ခြင်း
• အမေရိကန်တို့ သိမ်းပိုက်ခြင်း
၄၈,၆၇၁ km2 (၁၈,၇၉၂ sq mi) (အဆင့်: ၁၂၈)
10,878,246 (အဆင့် - ၈၆)
၂၂၀/km2 (၅၆၉.၈/sq mi) (အဆင့် - ၆၅)
ဒိုမီနီကန် ပီဆို (DOP)
အတ္တလန္တိတ်ဒေသ စံတော်ချိန် (UTC – 4:00)
+၁-၈၀၉၊ +၁-၈၂၉၊ +၁-၈၄၉
For an alternate area figure of ၄၈,၇၃၀ km2 (၁၈,၈၁၀ sq mi), calling code 809 and Internet TLD: 
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံသည် ကာရစ်ဘီယံ ဒေသအတွင်းရှိ ဂရိတ်တားအန်တေးလ်ကျွန်းစုများထဲမှ ဟစ်စပန်နီအိုလာကျွန်းပေါ်တွင် ရှိသောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ကျွန်း၏ အနောက်ပိုင်း ၃ ပုံ၁ပုံမှာ ဟေတီနိုင်ငံဖြစ်သဖြင့် ဟစ်စပန်နီအိုလာကျွန်းသည် ကာရစ်ဘီယံဒေသအတွင်း နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ မျှဝေပိုင်ဆိုင်သော ကျွန်းနှစ်ကျွန်းထဲမှ တစ်ကျွန်း ဖြစ်သည်။ လူဦးရေနှင့် အကျယ်အဝန်းအရ ဒိုမီနီကန် သမ္မတနိုင်ငံသည် ကာရစ်ဘီယံ နိုင်ငံများတွင် ကျူးဘားနိုင်ငံ ပြီးလျှင် ဒုတိယမြောက် အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ဧရိယာအကျယ်အဝန်း ၄၈,၄၄၂ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၁၈,၇၀၄ စတုရန်းမိုင်) ရှိပြီး လူဦးရေ ၁၀ သန်းခန့်မျှ ရှိသည်။
↑ Note: respondents self-identified their race; the term "indio" in the Dominican Republic is not associated with people of indigenous ancestry, but people of mixed European/African/Taíno ancestry, or any skin color between light and dark.
↑ Dominican Republic။ Central Intelligence Agency။
↑ Roorda၊ Eric Paul (April 28, 2016)။ Historical Dictionary of the Dominican Republic။ Rowman & Littlefield။ ISBN 9780810879065 – via Google Books။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ ၃.၄ Central America :: Dominican Republic။ Central Intelligence Agency။
↑ ၄.၀ ၄.၁ ၄.၂ Embassy of the Dominican Republic, in the United States။
↑ Historia de la República Dominicana။ Ediciones Doce Calles, S.L.။ 2010။ p. 409။ ISBN 978-84-00-09240-5။ 1 July 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "12 de julio de 1924, una fecha relegada al olvido"၊ Diario Libre၊ August 18, 2012။
↑ Estimaciones y proyecciones de la población total (xlsx)။ Oficina Nacional de Estadística။ 25 April 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 16 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Población - IX Censo Nacional de Población y Vivienda 2010။
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ ၉.၃ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။ Gross domestic product based on purchasing-power-parity (PPP) valuation of country GDP။
↑ GINI index (World Bank estimate) - Dominican Republic။ ကမ္ဘာ့ဘဏ်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ&oldid=726367" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၀၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။